आँखाको उपचार सेवा भरतपुर अस्पतालमा‌ पनि शुरु हुँदै #EyeTreatment • Health News Nepal
स्वास्थ्य मन्त्रालयले छात्रवृति कोटामा दुईजना चिकित्सकलाई भरतपुर अस्पतालमा पठाइसकेको छ ।
चितवन , ११, पुस २०७७
चितवनको भरतपुर अस्पतालमा आँखा रोग उपचार सेवा सुरु हुने भएको छ ।
अस्पतालका अनुसार यहीँ पुस महिनाभित्र आँखाको उपचार सेवा सुरु गर्न लागिएको हो । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरु किन्ने प्रकृया सुरु भैसकेको अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. जगन्नाथ तिवारीले जानकारी दिए ।
अस्पतालमा आँखा. उपचार सेवा सुरु गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले छात्रवृति कोटामा दुईजना चिकित्सकलाई भरतपुर अस्पतालमा पठाइसकेको छ ।
अस्पतालका मेसु डा. तिवारीले सुगर, प्रेसर लगायतका बिरामीको आँखाको सामान्य उपचारमा समेत बाहिर पठाउनुपर्ने भएकोले आँखा सेवा सुरु गर्न लागिएको बताए । ‘केन्द्रीय अस्पताल भएकाले सबै सेवा अस्पताल भित्र नै हुनुपर्दछ, बाहिर बिरामीलाई पठाउँदा पनि दुःख भएको थियो’ मेसु डा. तिवारीले भने, ‘अहिले साधारण सेवाबाट सुरु गछौं, पछि विशिष्ट सेवा दिन्छौं ।’
अहिले सम्म भरतपुर. अस्पतालकै जमिनमा भरतपुर आँखा अस्पतालले आँखाको उपचार दिँदै आएको छ ।
Tags: #government of Nepal#Health and population ministryBharatpur HospitalCorona Virus #Covid19Dr.jagatnath tiwariEye Treatment serviceNepal eye specialist
Pingback: डा. अधिकारीले आफ्नो जन्मोत्सवमा अस्पतालका अति बिपन्न नागरिकलाई सहयोग • Health News Nepal